Iziphumo zokuloba ngokungekho mthethweni | Ukuhlaziywa okuluhlaza
IYurophu isohlwaya amazwe amathathu angakwaziyo ukuphelisa ukuloba ngokungekho mthethweni
Europe bagqibela ngokuqhuba eyabo izisongelo: wenze amanyathelo abukhali kumazwe amathathu angakhange athobele ukuzibophelela ekupheliseni ukuloba ngokungekho mthethweni: EBelize, Cambodia y Gini. La mazwe mathathu awazukukwazi ukuthumela iintlanzi kumazwe angaphandle kwi-European Union, ngelixa iinqanawa zase-Europe azizukuba nelungelo lokuloba amanzi indawo.
Kokokuqala ukusukela oko kummiselo we lokuloba emanzini anzulu ngo-2008, ukuba iYurophu yenza ngale ndlela, iqhuba isohlwayo esisebenzayo. Inkqubo ye- ntengiso ekuhlaleni yenye yezona zinto ziphambili emhlabeni, kunye nezisongelo ze EBrussels baneziphumo zabo.
Ezi zigqibo ziyimbali, kwaye zibonisa ukuba i-European Union ngumzekelo ekulweni lokuloba engekho mthethweni. Abemi baseYurophu kufuneka bazi ukuba iintlanzi abazityayo ziyabanjiswa kwi a ezinzileyonokuba ivela phi na.
EBelize, Cambodia y Guinea khange umangaliswe: ukumiswa kwayo kuphendula kwinkqubo ende ye izilumkiso yiKhomishini. Ngaphandle kwalokhu, kuyaphawuleka ukuba incoko yababini ayophulwanga, kwaye ukuba zihlwayo inokuphakanyiswa ukuba la mazwe ayavuma ukwenza iinzame zokulwa lokuloba engekho mthethweni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » I-ecology » Ezolimo zendalo » IYurophu isohlwaya amazwe amathathu angakwaziyo ukuphelisa ukuloba ngokungekho mthethweni
ICuritiba, eBrazil, kunzima ukuba iphinde iziphinde
Ungcoliseko lomoya luyenza yande impova